Nhau - Transformer indasitiri ichapfuura 500 bhiriyoni muna 2021
Indasitiri yeTransformer ichapfuura 500 bhiriyoni muna 2021
Zvichikanganiswa nezvinetso zvakadai sekudonha kwekutengesa uye kugovera mitengo uye tsvina yakakomba yechigadzirwa, China ye transformer kubuda yakachinja zvikuru kubva muna 2015 kusvika muna 2019. Mushure megore ra2015, nekuzara uye kuchinja kwekuda kwemusika, kubuda kwayo kwakaderera zvishoma. Muna 2018, kubuda kwevashanduri munyika yose kwakawedzera kusvika pamabhiriyoni 1.76 kVA, kuwedzera kwe10.67% pamusoro pe2017.
Kudzikira kwakadzika kwehupfumi kwakawedzera mari yekutengesa yeindumisheni yeshanduko neanopfuura 10%.
Kubva 2015 kusvika 2019, mari yekutengesa yeindastiri yenyika yangu inochinja. Kubva 2017, mari yekutengesa yeindasitiri yeshanduko yenyika yangu yakaratidza kukura kwakashata. Muna 2018, yakakanganiswa nezvinhu zvakaita sekuwedzera kwekutengeserana kweSino-US uye kuwedzera kuderera kwehupfumi, kudiwa kwemusika wekushandura kwakaderera, uye mari yekutengesa yeindasitiri yeshanduko yenyika yangu yaive 465.5 bhiriyoni yuan, kudzikira kwe14.98% kubva 2017. Asi muna 2019, mari yekutengesa inotarisirwa kuve 4784, kuwedzera kwe2.7% kubva muna 2018.
Kukwikwidza kunotyisa mukati meiyo indasitiri yetransformer
Kubva pamaonero emakwikwi emakambani, indasitiri yetransformer yekuChina inokwikwidza zvakanyanya. Pakati pemakambani ekugadzira shanduko munyika yangu, kune vanosvika makumi matatu vanogadzira matransformer pamusoro pe500kV; makambani angangoita makumi mashanu ane 220kV uye pamusoro; anenge makambani zana nemakumi matatu ane chimwe chikero che110kV uye pazasi , Chimiro chemusika chinoda kugadzikana.
Makambani eChinese anoshandura anogona kukamurwa kuita misasa ina
Musasa wekutanga: Inoumbwa nemakambani makuru akawanda emarudzi akawanda akadai seABB, AREVA, Siemens, Toshiba, nezvimwewo, inotora 20% -30% yemugove wemusika;
Kembi yechipiri: mabhizinesi makuru epamba akadai seBaobian, TBEA, neXibian akawedzera hunyanzvi hwekuita uye nhanho yezvigadzirwa zvavo kuti vatore 30% -40% yemugove wemusika;
Kasasi yechitatu: makambani ekugadzira anomiririrwa naJiangsu Huapeng Transformer Co., Ltd., Qingdao Qingbo Transformer Co., Ltd., Shunte Electric Co., Ltd., Shandong Dach Electric Co., Ltd., Hangzhou Qianjiang Electric Group Co., Ltd., nezvimwewo vakaumba musasa wechitatu;
Kasasi yechina: Mabhizinesi mazhinji akazvimirira akagadzira imwe musika wemusika nekuda kweanochinjika maitiro ekushanda uye pasina mitoro isingabudiriri, achigadzira musasa wechina.
Saizi yemusika weindasitiri yeshanduko yenyika yangu inotarisirwa kudzoka ku500 bhiriyoni yuan muna 2021.
Nekuda kwekuderera kwehupfumi hwese uye nharaunda yekunze muna 2018, mari yekutengesa yeindasitiri yekushandura yakaderera. Iyo Electric Tiger Indasitiri Research Institute inotenda kuti nekuenderera mberi kwekugovera simba renyika yangu, kudiwa kwemusika weindasitiri yetransformer yenyika yangu kuchawedzera. Muna 2021, saizi yemusika weindasitiri yetransformer yenyika inodzokera ku500 bhiriyoni yuan.
Kunobva: International Energy Information Network
Nguva yekutumira: Oct-19-2020